Oromiyaa: “PP Oromootti gurguruun rakkoo guddaa Abiy’tti tahe” Roorroon Naafxanyaan yaaddu xiqqaa miti!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: “PP Oromootti gurguruun rakkoo guddaa Abiy’tti tahe” Roorroon Naafxanyaan yaaddu xiqqaa miti!!
Oromiyaa“PP Oromootti gurguruun rakkoo guddaa Abiy’tti tahe” mata duree jedhuun The African Report kan gabaase PP kana akka Oromoon didde addunyaanis sirriitti hubachuu mul’isa.
Filannoo dura daangaan Finfinnee murtaa’uu qaba. Kuni filannoo dhufuuf murteessaadha. Sagaleen garamitti lakkaa’amuuf deema? Eenyutu eenyu jalatti buluuf deema? Kuni filannoo dura hin furamu taanaan hannaaf balbala banaa dhiisuudha. Dhimma kana Oromoon hundi yeroo ammaa gaafachuu qaba. Dubbiin jajjabduun tana.
በኢትዬጲያ ታሪክ ውስጥ ክብሬን ማዕረጌን ሳይል ለቅሶ የሚደርስ፣ አትክልት የሚተክል እና ውሃ የሚያጠጣ፣ ሽፌር ሆኖ በነፃነት ባለስልጣንን,ቱሪስቶችን አገር የሚያስጎበኝ፣ ሞት እና የእድሜ ልክ እስራት የተፈረደባቸውን በነፃ የፈታ፣ ሊገሉት የመጡትን በፍቅር የሸኘ፣ በሙስና ያልተነካካ፣ በጎረቤት አገራት አልፈታ ለዘመናት ያለውን አለመግባባት በእርቅ የፈታ፣ በአንድ አመት ስልጣን የኖብል ተሸላሚ የሆነ ወ.ዘ.ተ አረ ስንቱን ልበል ምርጥ ጀግና የማይፈራ የኢትዬጲያ እና የአባ ገዳ ልጅ አቢቹ ሺ አመት ንገስ ብዬዋለው። እናንተስ????
EZEMA Oromiyaati jennaanii amma? Garuu afaan Oromoo fi alaabaan Minilik kun walirraa fokkatti. Jarri magaalaa Adaamaa keessatti moo’achuuf itti qophaa’aa jiru. Nafxanyaan magaalaa Adaamaa keessa akka baay’attu dhihoo hubannee jirra.</strong
Roorroon Naafxanyaan yaaddu xiqqaa miti!!
Jarri naafxanyaa EZEMA kun magaalaa oromoo hunda falmaa jiran jechuudhaa?
Dhimma magaalaa adaamaa irratti
ummata oromoo baadiyyaa dhufan
akkamitti mariisisan?Jedhee lolaa jira.
Roorroon naafxanyaan deemtuun kun
roorroo tilmaamuun danda’amuu miti.
Woggoota afuriif shan duras Namtichi
kun mana hidhaa keessatti qeerroon oromoodhaa waan dubbatan dhagahee qabsootti seene jedhee dubbatee ture.
Yaanni qeerroon oromoo mana hidhaa keessatti dubbachuu turan biyya keenya Ethiopiaf balaa hamaa ta’uuf waan
deemuuf jecha qeerroo oromoodhaa
jalaa Ethiopia baraaruuf qabsootti gale
jedhee dubbachuu ture.oromoon diina
Ethiopia waan ta’eef Ethiopia oromoorraa baraaruuf deema jechuudha.hardhas
qabsoon inni itti jiru diina ethiopiati jedhee
kan amanu ummata oromoodhaa
Ethiopia irraa dhoorkuuf qabsootti jira.
Naafxanyaan oromoorratti karoora jabaa qabdi.Yoo dandeesse biyyattiirraayyuu
oromoo balleessuudha karoora qabu.
Yoo dadhaban ammoo ummanni oromoo
jalatti cabee akka baqataa alaa dhufeetti
akka jiraatuudha qabsoon naafxanyaa.
Dammaqina guddaadhaan naafxanyaa oromoof oromiyaarraa eeguun dirqama guddaa akka taate dagachuu hinqabnu.
Kunoo EzEMAN oromoo bakka bu’a jedhee as bahee jiraa gab jedhaa!
Maali jennaan dhabboliin oromo gaaddisa jalaa ka’aa hin jiranii jedha!